About us - Xuzhou Shengsida Ukwakhiwa Imishini Co., Ltd.
Izingxenye ze-Crane Spare
Izingxenye ze-Crane Hydraulic
Crane umfutholuketshezi Valve
I-Crane Counterbalance Valve
I-Crane Hydraulic Lock
I-Crane Operating Valve
I-Crane Slewing Control Valve
Amanye ama-valve wokubacindezela
Crane umfutholuketshezi Motor
Crane umfutholuketshezi Amafutha Pump
I-Crane Gear Amafutha Pump
I-Crane Plunger Pump
I-Crane Steering Amafutha Pump
Izingxenye ze-Crane Chassis
Izakhi zenjini ye-Crane
Crane umfutholuketshezi eyisilinda
Isilinda se-Crane Horizon
Crane Luffing eyisilinda
Crane No.5 Outrigger eyisilinda
Crane Okunye eyisilinda
Crane Steering Aidoiljar uMbhalo
Crane Telescopic eyisilinda
Crane Kuqondile eyisilinda
I-Crane Alarm Light
Ukukhanya Kwe-Crane Back Fog
Ukukhanya Kwe-Crane Back Signal
Ukukhanya Kwe-Crane Caution
I-Crane Combined headlight
Crane Inkungu Lamp
Ukukhanya kwe-Crane Name-plate
Crane Yokupaka Light
Crane Umsebenzi Khanyisa
Ekupheleni-Uhlaka Maka Lamp
Isici sesihlungi se-Crane
Ezinye izinto zokuhlunga
Clutch master futha
Bamba futha sub
Uhlelo lwe-Crane Torque
Iyunithi yobude nobude be-engeli
inzwa yengcindezi kawoyela
Uhlelo lokuqondisa i-crane
Iphampu kawoyela yokuqondisa
Ingalo yokuqondisa rocker
Induku yethayi yokuqondisa
Izingxenye ze-Crane Structural
I-crane pulley nesilayida
Crane uhlelo kagesi
Izintambo zokubopha izintambo
I-Crane Cab nezinsiza
Ubakaki wesibuko sangemuva
Iphaneli yokunciphisa yangaphakathi
Uhlelo lwendlela yegesi
Steel Ikhebula & Ukukhala
Isungulwe ngo-2005, i-Xuzhou sheng si da Machinery Co., LTD, igxile ebhizinisini lezesekeli ezijwayelekile zemishini yokwakha nomshini ophelele.
Owandulelayo wenkampani ungomunye wabasabalalisi bokuqala beXCMG, Zoomlion, Sany Heavy Industry Co, LTD kanye neGuangxi Liugong Machinery Co., LTD, eyasungulwa ngonyaka ka-2000, ebisikhonze imakethe yasekhaya isikhathi eside futhi yahlonishwa kakhulu futhi yayithenjwa kabanzi ngamakhasimende. Ngokuthuthukiswa okusheshayo kwembulunga yonke, inkampani yethu isungulwe ngokwandisa imakethe yamazwe omhlaba.
Kutholakale edolobheni elibalulekile lezokuthutha e-China -Xuzhou, elibizwa nangokuthi "i-OrientalAthens" kanye "nedolobha lemishini yokwakha e-China", sijabulela ukufinyelela okulula kumanethiwekhi amakhulu ezokuthutha, ulwazi oluningi lokukhiqiza nokukhangisa kanye ne-high- izinsiza zomkhiqizo osezingeni. Izimakethe zethu eziyinhloko zifaka phakathi iRussia, i-Afrika, iMiddle East, i-Southeast Asia namanye amazwe.
Ukulawulwa kwekhwalithi okuqinile kufaka yonke inqubo, kusuka ekuhlolweni kwempahla nasekucubungululeni kuze kufike ekuhlolweni nasekupakisheni, ukulwela ukufeza umgomo wekhwalithi we "high quality and zero flaw".
Ngokuya ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme, insizakalo enhle kakhulu, intengo enengqondo nokulethwa ngesikhathi esifanele, sibheke phambili ukubambisana okuhle nabalingani ekhaya nakwamanye amazwe nokwakha ikusasa elihlasimulisayo.
Izingxenye zokungcebeleka zoqobo
Sicela uxhumane nathi ngezingxenye zokungcebeleka zoqobo. Ngaphezu kwalokho, siphinde sibe umphakeli wezingxenye zokulungisa ezishintshayo nezinsizakalo zemikhiqizo eminingi, engene kulayini womkhiqizo ngokuthengwa kwamasu.
Izingxenye zokungcebeleka ze-crane zemikhiqizo eminingi
Sijwayele ama-cranes wemikhiqizo eminingi, hhayi nje i-XCMG brand. Ngokuvamile, i-XCMG ingathenga izingxenye zezipele ze-crane kubakhiqizi bemishini yoqobo.
Izingxenye ezenziwe ngokwezifiso
Asikwazi akhiqize izingxenye ezisele ezihlangabezana nemininingwane yakho. Izingxenye ezizilungiselele zifaka izingwegwe, amasondo, amagiya namabhere. Izimpahla ziyatholakala ukuthengiswa ezindaweni ezikhethiwe, sicela uxhumane nathi ukuthola imininingwane.
Ukunakekelwa komjikelezo wempilo
Indlela yethu yokondla i-crane isuselwa ekunakekelweni komjikelezo wempilo, okuyindlela yokulungisa ebanzi nehlelekile esekelwa ngamathuluzi nezinqubo ezithuthukile zomhlaba. Ukunakekelwa komjikelezo wempilo kuthola inani eliphakeme lomjikelezo wempilo ngokuthuthukisa umkhiqizo wesikhathi sokuphumula nokunciphisa izindleko zokuphumula.
Inkonzo yesikhathi sangempela
Sisebenzisa i-Industrial Internet ukuqapha ukude, ukuxilonga, ukuhlaziya nokubikezela izinsizakalo zesondlo ngokuya ngokusetshenziswa. Nikeza amakhasimende ngolwazi olusobala nolwabelwe, isipiliyoni samakhasimende esiyingqayizivele sesikhathi sangempela.
Isiko lokuphepha nerekhodi
Konecranes, akukho okubaluleke kakhulu futhi okubaluleke ngaphezu kokuqinisekisa ukuthi umsebenzi wethu wenziwa ngokuphepha nangendlela efanele.
Izinsizakalo zethu zokubonisana zisiza ukuqonda izinqubo zakho nokusebenza ngokujulile.
Ukuzibophezela okuphelele kwensizakalo
I-Konecranes inikeza isethi ephelele yezinhlelo zesevisi eyenziwe ngezifiso nemikhiqizo ukuhlangabezana nezidingo zakho.
Ibanga leZero leKhasimende
Sinohlelo lwenethiwekhi yomhlaba wonke, futhi sinezindawo zenkonzo ezingama-600 emazweni angama-50.
Njengenkampani evelele, sihehe inani elikhulu lamathalenta avelele. Bangahlala ngenxa yokuzibophezela kwethu ekufezeni ukukhula nentuthuko.
Sinezinhlelo zokuqeqeshwa kwezobuchwepheshe nezitifiketi okuhloswe ngazo ukwenza ngcono ukuphepha nokukhiqiza. Insizakalo yethu isekelwa yinethiwekhi yomhlaba ethuthukile kwezobuchwepheshe.
Singumkhiqizi wemishini esezingeni eliphakeme onolwazi lweminyaka engaphezu kwengu-100 nemishini engama-600,000 efakwe kwizivumelwano zokugcinwa. Okuhlangenwe nakho kukaKonecranes kuzwelana nama-sub-brand atholakele kanye nesisekelo samakhasimende. Sinamalungelo empahla yobuhlakani kuyo yonke imikhiqizo engaphansi etholakalayo.
Njengenkampani enhle kakhulu ehlola ngokuqhubekayo emkhakheni we-R & D nobuchwepheshe obuhlakaniphile, ukusebenza kwethu ekunikezeni nasekusekeleni imikhiqizo nezinsizakalo ezintsha kwamukelwa kahle.
Sibheke phambili ukukusebenzela. Imikhiqizo yethu eyinhloko imi kanje. Futhi uma udinga olunye ulwazi olungashiwongo kulo, sicela ukhululeke ukusazisa.